Col. Qadaafi oo codkiisa la maqlay mudo dagaalna ku baaqay (Daawo) – SBC
Col. Qadaafi oo codkiisa la maqlay mudo dagaalna ku baaqay (Daawo)
Posted by editor on Siteenbar 1, 2011 Comments
Hogaamiyaha baxsadka ah ee dalka Liibiya Col Muammar Qaddafi ayaa shaaca ka qaaday in uu sii wadi doono dagaalka uu uga soo horjeedo cadowegiisa isagoo wacad ku marey inaanu isdhiibi doonin oo uu dagaalami doono.
Fariin cod ah oo laga baahiyey Telefishinak Al-Rai ee Liibiya laga leeyahay isla markaana si weyn u taageera Col. Qadaafi balse saldhigiisu ku yaal magaalada Dimishiq ee caasimada wadanka Suuriya.
“Dadka reer Liibiya jilbaha dhulka ma dhigi karaan, ismana dhiibi karaan, dumar ma aynu nihin” ayuu ku yiri fariintiisa.
Kooxaha ku kacsan Qaddafi ayaa waxay si weyn iminka kaabiga ugu hayaan magaalada Sirta ee uu ku dhashay Col. Qadaafi waxaana halkaasi ku sugan kumanaan ciidamo daacad u ah hogaamiyihii Liibiya oo iminka xukunkiisu gambalku ka soo dhacayo.
Kooxaha mucaaradka ee ka soo horjeeda Col. Qadaafi ayaa mudo todobaad ah waxay siiyaan kooxaha daacada u ah Col. Qadaafi inay hubka iska dhigaan oo ay isa soo dhiibaan.
Khudbada Qadaafi uu jeediyey oo 10 daqiiqo aheyd wuxuu ku sheegay in dadka reer Liibiya ay “la dagaalamayaan guumeystayaal”.
“Waa inay jirtaa u dulqaadasho loo dulqaadanayo xornimada, kooxaha jawaasiista ah way dhamaan doonaan, NATO way burburi doontaa, daacadnimada NATO ee kooxaha jawaasiistuna way dhamaan doontaa” ayuu yiri Col. Qadaafi.
Col. Qadaafi oo qoxootinimo dalbadey
Wargeys ka soo baxa wadanka Al-Jeeriya ayaa wuxuu maanta qoray war uu ku sheegayo in Col. Qadaafi uu waydiistey dawlada Al-Jeeriya qaxootiniumo taasi oo la sheegay inaanay xiligan suurtagali karin.
Wargeyska Al-Wadan wuxuu sheegay in Col. Qadaafi uu isku dayey in xiriir telefoon la sameeyo madaxweynaha Al-Jeeriya Abdelaziz Bouteflika, isagoo wargeysku sheegay in Col. Qadaafi uu ka soo hadley magaalada Ghadamis oo ku taal xaraha Liibiya una dhaw xuduuda dalkaasi uu la leeyahay Al-Jeeriya.
Wargeysku wuxuu sheegay in madaxweyne Abdelaziz Bouteflika uu diidey in uu telefoonka kula hadlo Col. Qadaafi.
HADABA LINK VIDEO HOOSE KA DAAWO KHADAAFI OO HADLEY